ओलीसँग चपलीहाइटमा भएको थियो यस्तो गोप्य सहमति, माधव नेपाल आफैले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले गत फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिई २०७५ जेठ २ को संरचनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएको खुलासा गरेका छन्। उनले यो खुलासा आज संघीय संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग गरेका हुन्।
आफूहरूको बटमलाइनअनुसार नै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली अगाडि बढ्न चाहेको उनको भनाइ थियो। ‘फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिने र जेठ २ गतेको अवस्थामा पुग्ने हाम्रो यो बटमलाइन थियो। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति हुन्छ भन्नु भएको छ, बाँकी मोडालिटीबारे छलफल गर्न कार्यद बनाउने भन्ने छ,’ उनले भने।
गत फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन घोषणा गरेका थिए भने विधान संशोधन पनि गरेका थिए। पार्टीभित्र देखिएका विवाद हल गर्न थप छलफल आवश्यकता पर्न सक्ने पनि उनले बताए।
अध्यक्ष ओली र नेपाल बिहीबार चपलीहाइटमा छलफल गरेका थिए। ओलीले नेपालसहित उनी पक्षका चार नेतालाई गरेको निलम्बन फुकुवासमेत गरेका थिए। यस्तै बिहिबार भएको छलफलमा ओली ७५, जेठ २ मा फर्कन तयार भएको र आफूले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू निकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ समेत गरेका छन्।
‘मैले फागुन २८ गतेबाट पछि हट्ने कि, नहट्ने, जेठ २ मा पुग्नेकि, नपुग्ने भनेर भनेको छु। उहाँले मैले पनि त्यही गर्न चाहेको छु भनेर सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ,’ नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘ओलीजीले फागुन २८ को कदम फिर्ता लिएर जेठ २ मा कसरी फर्कने विषयमा कर्यदल बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले जेठ २ मा जानै मिल्दैन भन्नेमा म छैन भनेर समेत भन्नुभएको छ।’
नेपाल निकट ती नेताका अनुसार अब दुई पक्षका बिचमा कार्यदल बन्नेछ। कार्यदलले कसरी पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गर्ने भनेर निर्णय गर्नेछ। नेपाल पक्षले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको संरचनामा लैजानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
भोट कसलाई हाल्ने भन्नेमा अलमल ?
नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच चोचोमोचो मिलेसँगै जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन प्रभावित हुने भएको छ । काँग्रेस र माओवादीको समर्थनमा उम्मेदवार बनाइएका डा. खिमलाल देवकोटालाई माधव नेपाल समूहले भोट दिन्छ कि धोका दिन्छ ? अहिले वागमती प्रदेशमा यो प्रश्नले चर्चा पाएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार पार्टी एकता कायम राख्न जेठ २ गतेको स्थितिमा फर्कने गरी उधारो सहमति भएको छ । तर, केन्द्रीय राजनीतिको यो समीकरणले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा प्रभाव पर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
जेठ ६ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल उम्मेदवार बनेका छन् । माधव नेपाल समूहले एमाले निकट बुद्धिजीवी डा. खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेदवार बनाएको छ । तर,नेकपा एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा फेरबदल आएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका उम्मेदवार डा. देवकोटा समस्या पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।
डा. देवकोटाले भने कुनै पनि हालतमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूको समर्थन आफूलाई रहेकाले उम्मेदवारी कायम रहने उल्लेख गरेका छन् ।
आफूलाई नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि पूर्ण विश्वास र सद्भाव राख्ने भएकाले उम्मेदवारीमाथि पुनर्विचार गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर भएको उनले बताएका छन् । डा. देवकोटाले राजनीतिक घटनाक्रमका कारण शुभचिन्तक एवं मतदाताहरुले आफ्नो उम्मेदवारीको विषयमा जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
‘मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरु विभाजित हुनुहुँदैन’ देवकोटाले भने, ‘राजनीतिक पार्टी नीति, विधि र पद्दतिमा चल्नुपर्छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूको समर्थन र सहयोगबाट मैले उम्मेदवारी दिएको स्थितिमा यसमा पुनर्विचार गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।’
बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका नेता अरुण नेपालले राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा पार्टी निर्देशनअनुसार नै मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रतिक्रिया दिए । बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डको सदस्यसमेत रहेका नेता नेपालले पार्टी प्रधान रहेकाले गुट–उपगुट भन्दा पनि पार्टीको निर्णयअनुसार गरिने बताए ।
केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा पनि पर्ने निश्चित रहेकाले यसमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘देशकै ठूलो पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्दा एमालेमा मात्रै नभई संविधान, लोकतन्त्र र संघीयतामाथि पनि असर पर्ने भएकाले कुनै एक व्यक्तिका लागि हामी पार्टी विभाजनतर्फ जानुहुँदैन,’ नेपालले भने ‘त्यसैले हामी पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार निर्वाचनमा जान्छौँ ।’
यसअघिको घटनाक्रमका आधारमा डा. देवकोटालाई समर्थन दिएको स्वीकार गर्दै अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर पार्टीले डा. देवकोटालाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए । आफूहरु सोही निर्णयअनुसार निर्वाचनमा जाँदा डा. देवकोटालाई धोका दिएको नहुने उनले तर्क गरे ।
उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशका १०९ जना र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरु २३८ जनाले मतदानमा भाग लिने छन् । यीमध्ये माधव पक्षले भोट दिँदा डा. देवकोटाले जित्ने सम्भावना छ ।
सपथ ग्रहणमा ओलीले के भने ?
यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका सबै अंग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालित हुन आग्रह गरेका छन्।
तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ ग्रहणपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पद बहाली गर्दै उनले मानवीय सेवाको उदात्त भावना अघिपछिभन्दा बढी प्रकट गर्न आग्रह गरे। महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित नियमको पालना गर्न र कुनै अनियमितता हुन नदिन उनले सचेत गराए।
उनले भने, ‘यतिबेला सबै एकजुट भएर महामारीको रोकथाममा लाग्नुपर्नेमा सरकारका राम्रा कामलाई पनि अन्देखा गर्ने र असहयोग वा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन। कुनै पनि नाममा हुने भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिने कार्य सह्य छैन। सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल, नेता र कार्यकर्तालाई विकराल स्थितिमा संवेदनशील भएर विधि र कानूनको पालना गर्न आग्रह गरे। उनले छिमेकी र मित्रराष्ट्रलाई महामारी नियन्त्रणमा सघाउन पनि आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको स्रोत, साधन र ज्ञानको सही रूपमा प्रयोग भई जनताका लागि परिणाम दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नवनियुक्त मन्त्री र सरकारका उच्च कर्मचारीको सहभागिता थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आज राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा उनी प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका हुन्।